बिहानै बासी मुखमा पानी पिउँदा शरीरमा के हुन्छ? जानौं « गोर्खाली खबर डटकम
स्वाद र औषधिले भरिपूर्ण अमलाको जुसले निको पार्छ यी रोगहरु (भिडियो)
कतारका लागि उ’डेको विमानमा बिरालोले पाइलटलाई आ’क्र’म’ण
पानी हाम्रो जीवनका लागि अति आवश्यक चीज हो तर के तपाइलाई यो थाहा छ कि दैनिक बिहान बासी मुखमा पानी पिउनाले जो हाम्रो मुखमा एक किसिमको राल हुन्छ त्यो हाम्रो पेटमा पुगेर कयौं रोगहरुबाट बचाउँछ ।
राल मुखमा बन्ने यस्तो पदार्थ हो जसले एन्टीसेप्टीकको जस्तो काम गर्दछ र हामीले थाहै नपाइ कयौं रोगबाट बचाइ रहेको हुन्छ । पानी पिउनाले शरीरका कयौ रोग निको हुन्छ, पानीले छालाकोको रोग लाइ पनि हतपत लाग्न दिदैन भने विभिन्न किसिमका रोगहरु लाग्न दिनबाट बचाउन पनि पानीले धेरै ठूलो सहायता गर्दछ । यदि पानीलाई बिहानै बासी मुखमा पिउने गरियो भने यसको फाइदा सुनेर तपाइ पनि अचम्ममा पर्न सक्नु हुनेछ । आउनुहोस जानौं पानीलाई कुन समयमा कति मात्रामा पिउने? किनकी पानी पिउने सही तरीकाले मात्र तपाईलाई स्वस्थ राख्न सक्दछ ।
बिहान बासी मुखमा पानी पिउनुको फाइदाः
बिहानै उठ्ने बितिकै बासी मुखमा पानी पिउनाले शरीर भित्रका अंगहरु ज्यादा सक्रिय हुने गर्दछन् जसले पाचन प्रक्रिया सहज हुन्छ भने अनुहारमा पनि चमक बढ्दछ । साथै बासी मुखमा पानी पिउँदा शरीरभित्रका बिकारहरुको पनि सफा हुने काम हुन्छ ।पानीले रगतमा भएका विषाक्त पदार्थ सफा गर्छ। पानी पिउनाले नयाँ रक्त कोषिया र तन्तु बन्न मद्धत पुग्छ, जसले तौल सन्तुलित राख्न सहयोग पुर्याउँछ। जसले गर्दा हाम्रो शरीर स्वस्थ बन्न मददत गर्दछ ।
सुत्नुभन्दा पहिले पानी पिउनाले मुटु रोगका बिरामीहरुलाई फाइदा पुग्दछ । यसले मुटुलाई नर्मल अवस्थामा राख्नुका साथै हर्ट अट्याक बाट पनि जोगाउँदछ ।नुहाउनुभन्दा पहिले एक गिलास पानी पिउनुस जसले हाइ ब्लडप्रेसर लाइ कन्ट्रोल गर्न मद्दत गर्दछ ।
साँझको खानाभन्दा पहिले यदि तपाइले १ गिलास पानी पिउनुभयो भने यसले पेट भरिनेहुनाले धेरै खानाको जरुरत पर्दैन जसले तपाइलाइ शरीर मोटाउनबाट जोगाउद छ ।तपाइ जुन स्थानमा भएपनि तपाइ यदि तनावमा पर्नु भयो भने तत्काल १ गिलास पानी पिउनुहोस यसले तपाइको दिमागलाई शान्त राख्न मद्दत गर्दछ र तपाइको तनाव पनि कम हुन्छ ।
मित्रहरु पानी पिउने नियमलाई यदि तपाइ पनि सुधार गर्नु हुन्छ भने यसबाट हुने फाइदा तपाइलाइ पनि मिल्न थाल्दछ । जसले गर्दा तपाइ आफ्नो स्वास्थ्यसँग जोडिएको समस्याहरुलाई समाधान गर्न सक्नु हुनेछ ।
आफ्नो छोरा छोरीकै सामु श.रीर सुम्पिन बाध्य भएकी यी महिलाको कथा, धादिङ्गमा टिप्पर भित्र यस्तो सम्म भयो (भिडियो हेर्नुहोस)
देह त्याग गर्नु अघि मान्छेको मनमा के बिचार आउँछ? एक महिलाले नदीमा हाम फाल्नु अघि बनाएको यो (भिडियो हेर्नुहोस्)
नेपालमै फल्छ विश्वकै सबैभन्दा महंगो तरकारी ! किनेर खान सक्नुहुन्छ ?हेरौ योतारिका